Nyansahu ne Bible Hyia? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Dari Dutch Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French French Sign Language Futuna (East) Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hamshen (Armenian) Hamshen (Cyrillic) Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Icelandic Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabardin-Cherkess Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Kazakh Kekchi Khakass Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Martiniquan Creole Mashi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Niuean Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Vlax, Russia) Ronga Russian Russian Sign Language Réunion Creole Samoan Sango Sateré-Mawé Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Nyansahu ne Bible Hyia?
Aane. Nea enti a ɛte saa ne sɛ, ɛwom sɛ Bible nyɛ nyansahu nhoma deɛ, nanso nyansahu ho asɛm a Bible ka biara yɛ nokware. Nhwɛso a edidi so yi bɛma yɛahu sɛ nyansahu ne Bible hyia, na nyansahu ho nsɛm a Bible kae no yɛ nokware. Ɛbɛsan ama yɛahu sɛ, bere a wɔkyerɛw Bible no, na nnipa binom kura nneɛma ho adwene a ɛne nyansahu nhyia koraa.
Ɔsoro, asase, ne emu nneɛma nyinaa wɔ mfiase. (Genesis 1:1) Nanso, anansesɛm ne atetesɛm kyerɛ sɛ, ɛnyɛ obi na ɔbɔɔ ɔsoro, asase, ne emu nneɛma nyinaa. Mmom na nneɛma atu afra ayɛ basaa; ɛdede mu ara na biribiara bae. Ná Babilonfo nso gye di sɛ, anyame a wɔbɔɔ biribiara a ɛwɔ soro ne asase so no, wofi ɛpo mmienu mu na wɔbae. Anansesɛm foforo nso kyerɛ sɛ kosua kɛse bi na ɛpaee maa ɔsoro, asase ne emu nneɛma nyinaa fi bae.
Obi na ahyehyɛ abɔde mu mmara a ɛma biribiara kɔ so pɛpɛɛpɛ wɔ soro ne asase so no. Ɛnyɛ anyame bi na wɔhyɛ baabi repiapia nneɛma. (Hiob 38:33; Yeremia 33:25) Wokɔ wiase baabiara a, atosɛm a wɔka ne sɛ yɛwɔ anyame bi wɔ hɔ a wotumi yɛ nea wɔpɛ biara. Na ɛtɔ mmere bi mpo a wotumi twe nnipa aso yayaayaw, nanso nnipa ntumi nyɛ ho hwee.
Asase no sɛn ahunu mu a hwee nkura mu. (Hiob 26:7) Tete no, na nnipa pii gye di sɛ asase yɛ tratraa, na ɔbran bi na ɔsõ. Ebi nso ka sɛ na esi aboa bi te sɛ ɛkoɔ anaa akyekyere akyi.
Sɛ awia bɔ po anaa nneɛma foforo so a, nsu a ɛtwe fi mu no kɔ soro kɔdan mununkum. Afei ɛsan dan nsu, sukyerɛmma anaa asukɔtweaa na ɛtɔ gu asase so. Eyi nyinaa kogu asubɔnten ne asuti ahorow mu. (Hiob 36:27, 28; Ɔsɛnkafo 1:7; Yesaia 55:10; Amos 9:6) Tete no, na Greekfo susuw sɛ ɛpo nsu wɔ asase ase, na ɛno na epuw bɛyɛ asubɔnten ahorow no. Wokuraa saa adwene yi mu ara besii bɛyɛ afe 1800 mu.
Mmepɔw tumi fi asase mu ba na etumi dwiriw gu. Mmepɔw a yehu no nnɛ no, kan no na ne nyinaa wɔ po ase. (Dwom 104:6, 8) Nanso, wɔka wɔ anansesɛm ahorow mu sɛ anyame bi na wɔmaa mmepɔw besisii hɔ sɛnea yehu no.
Sɛ yedi yɛn ho ni a, yɛntaa nyare. Mmara a wɔde maa Israelfo no, na ebi ne sɛ, sɛ obi de ne nsa ka obi a wawu a, ɛsɛ sɛ ɔhoro n’atade. Sɛ obi nya nsanyare a, ɛsɛ sɛ woyi no fi nnipa mu de no kosie baabi. Afei sɛ wogya wɔn anan a, ɛsɛ sɛ wɔkata so yiye. (Leviticus 11:28; 13:1-5; Deuteronomium 23:13) Nanso bere a wɔde saa ahyɛde yi maa Israelfo no, na Egyptfo fa akwan horow so sa yare. Emu baako ne sɛ, sɛ kuru tu obi a, na wotumi de nnipa tiafi to so.
Wohwɛ Bible mu yiye paa a, wubehu sɛ mmuae no yɛ dabi. Nyansahu ho nsɛm a Bible ka no, nea nkurɔfo ka ma ɛyɛ te sɛ nea mfomso wɔ ho no bi na edidi so yi:
Atosɛm: Bible ka sɛ wɔde nnansia a emu biara yɛ nnafua 24 na ɛbɔɔ soro ne asase ne biribiara a ɛwɔ mu.
Nokwasɛm: Bible ka sɛ Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase ne biribiara a ɛwɔ mu. Ankyerɛ bere pɔtee a ɔhyɛɛ ase bɔɔ nneɛma. (Genesis 1:1) Afei nso, adebɔ nna a wɔkaa ho asɛm wɔ Genesis ti 1 no yɛ bere pɔtee bi a yennim ano. Bere dodow a wɔde bɔɔ ɔsoro ne asase nyinaa mpo no, wɔfrɛ no “da” baako.​—Genesis 2:4.
Atosɛm: Bible ka sɛ wodii kan bɔɔ afifide ansa na wɔrebɔ awia a ɛboa afifide ma ɛyɛ n’aduan no.​—Genesis 1:​11, 16.
Nokwasɛm: Bible ka sɛ wodii kan bɔɔ awia ansa na wɔrebɔ afifide. Awia ka nsoromma a ɛwɔ “ɔsoro” a wɔbɔe no ho. (Genesis 1:1) Adebɔ “da” a edi kan no, awia hann bɛtɔɔ asase no so. Bere a eduu adebɔ “da” a ɛtɔ so mmiɛnsa no, na wim ada hɔ, afei na awia hann no ano ayɛ den a ebetumi aboa afifide ma ayɛ n’aduan. (Genesis 1:​3-5, 12, 13) Akyiri yi koraa na awia no yii no ho ma sɛ wugyina asase so a wutumi hu awia no yiye.​—Genesis 1:​16.
Atosɛm: Bible ka sɛ awia no kyini fa asase no ho.
Nokwasɛm: Ɔsɛnkafo 1:5 ka sɛ: “Owia nso pue, na ɛkɔtɔ; ɛde ahopere kɔ n’afã, na ɛhɔ na ɛsan pue fi.” Sɛ wugyina asase so a ɛyɛ wo sɛ awia no pue fi baabi na akɔtɔ wɔ baabi foforo. Wei ho asɛm ara na Bible no reka. Ɛnnɛ mpo obi betumi aka sɛ ‘awia pue na ɛkɔtɔ,’ nanso na onim sɛ asase mmom na ekyini fa awia no ho.
Atosɛm: Bible ka sɛ asase yɛ tratraa.
Nokwasɛm: Bible de nsɛm “asase ano” di dwuma de kyerɛ asase no mmeae a ɛwɔ akyirikyiri “nohoa.” Wei nkyerɛ sɛ asase no yɛ tratraa anaa wubetumi akɔ ara akosi n’ano. (Asomafo Nnwuma 1:8) Saa ara nso na asɛm “asase no afanan” yɛ kasakoa a ɛkyerɛ asase so nyinaa. Ɛnnɛ obi betumi aka sɛ, nnipa fi apuei, atɔe, atifi, ne anafo de akyerɛ asɛm koro no ara.​—Yesaia 11:12; Luka 13:29.
Bible Bible Nsɛmmisa Ho Mmuae Bible Ne Nyansahu Hyia Nyansahu Ne Bible
Yehowa Adansefo Gye Di sɛ Nnansia Paa na Onyankopɔn De Bɔɔ Wiase?
Wunim sɛ asɛm a ebinom ka sɛ nnansia paa na wɔde bɔɔ wiase no ne Bible nhyia?
Share Share Nyansahu ne Bible Hyia?
ijwbq asɛm 82
Bere Bɛn Na Onyankopɔn Fii Ase Bɔɔ Ɔsoro Ne Asaase?
Nea Nyansahu Ayɛ Ama Wo